DISTRIKAN’IAKORA : Rongony 28 gony, basy miisa roa tra-tehaky ny zandary
Noho ny fiaraha-miasa amin’olon-tsotra sy fisafoana ny tanàna, efa am-bolana maro izay dia afa-po tanteraka amin’ny fivoarana ireo zandary mpampandry tany ao anatin’ny Distrikan’Iakora iny. 12 juin 2019
Mitohy ny fahazoana vokatra tsara ary azo lazaina fa lefy ny asan-jiolahy mahery vaika nisesilany tao an-toerana. Rongony nahatratra 28 gony niampy basim-borona tsy ara-dalàna miisa roa no saron’ny zandary tany an-toerana, omaly izay avy nalaina tany amin’ny Fokontanin’i Mahatsinjo Kaominina Mahabo Distrikan’i Betroka.
Raha ny fanampim-panazavana voaray avy amin’ny lehiben’ny vondron-tobim-paritra Lietnà Tody Fenohary Alain dia saika haparitaka any amin’ny Kaominina Ankaramena ireo zava-mahadomelina ireo no tra-tehaka tampoka. Fanamby apetraky ny mpitandro filaminana any amin’iny Faritra iny moa ny hampiverina amin’ny laoniny hatrany ny filaminam-bahoaka. Koa manao antso avo amin’ny fokonolona izy ireo mba hiara-hientana sy hanome loharanom-baovao marim-pototra hatrany ho fanamoràna ny fisamborana ireo jiolahy.
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (143) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (93) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (90) 22 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (81) 26 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (79) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (70) 22 mai 2020